झापा–१ मा के हुन्छ यसपाली ? « Loktantrapost
झापा–१ मा के हुन्छ यसपाली ?
२० कार्तिक २०७४, सोमबार १२:५१
मेचीनगर । एकातिर विश्वप्रकाश शर्मा, अर्कातिर राम कार्की ‘पार्थ’ । आगामी मङ्सिर २१ गते हुने चुनावको मैदानमा झापा–१ का हेभिवेट उम्मेद्वारहरु हुन् यी । सबैको जिज्ञासा छ–‘के हुन्छ यसपाली ?’
सङ्गठन, मुद्दा र रणनीतिका दृष्टिले निकै बलियो ढङ्गले यसपाली विश्वप्रकाश चुनावमा होमिएका छन् ।
‘त्यस्तै भो त्यसपाली, विश्वप्रकाश यसपाली’ भन्ने नारा लगाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसले झापा–१ मा विश्वप्रकाश शर्मालाई दोस्रोपाली संसदको चुनावी मैदानमा उतारेको छ ।
यसअघिको जस्तो हार नदोहोरियोस् भन्नाका लागि उम्मेद्वारी दर्ता अघि नै काङ्ग्रेस वृत्तबाट जित्नै पर्ने दवावका साथ ‘त्यसपाली’ र ‘यसपाली’को नारा लगाइएको बुझ्न सकिन्छ ।
इतिहासले नै हाल झापा क्षेत्र नं. १ रहेको भूगोलमा कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसविच परम्परागत प्रतिष्पर्धा रहेको देखाउँछ । यहाँबाट एमालेका राधाकृष्ण मैनाली (२०४८), देवीप्रसाद ओझा (२०५१) र रविन कोइराला (२०७०) संसद्मा निर्वाचित भए ।
यसैगरी, नेपाली काङ्ग्रेसका नरेन्द्रविक्रम नेम्बाङ (२०५६) मात्र यस क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी वाहेक अरु कसैले पनि काङ्ग्रेसबाट जित निकाल्न सकेनन् ।
२०५६ सालको आम चुनावमा नेकपा एमालेका विष्णु प्रसाइँलाई र नेपाली काङ्ग्रेसका नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङले हराएका थिए । त्यसबेला एमाले र माले विभाजित भएको थियो । मालेबाट पुष्प पोखरेल उम्मेद्वार बनेका थिए ।
एमाले विभाजित नहुँदाको अवस्थामा काङ्ग्रेसले कहिल्यै जित्न नसकेको यस क्षेत्रमा २०७० को चुनावदेखि विश्वप्रकाश मैदानमा आशलाग्दो र बलियो उम्मेद्वारको रुपमा उदाए । उनी त्यसबेला रविन कोइरालासँग झिनो मतान्तरले मात्र पराजित भएका हुन् ।
२०६४ सालमा देशैभर माओबादी लहर आउँदा यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार नरेश खरेल पराजित हुन पुगे । त्यसबेला काङ्ग्रेसका नरेन्द्र विक्रम नेम्वाङ पनि पराजित हुन पुगे ।
२०७० देखि नेकपा माओबादी यस क्षेत्रमा नयाँ शक्तिको रुपमा देखा पर्यो । तर माओबादीको आँधी मत्थर हुने वित्तिकै २०७४ सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा एमाले पहिलो र काङ्ग्रेस दोस्रो शक्ति बने ।
यसपाली चुनावी रिङभित्र यस क्षेत्रको एउटा बलियो पात्र उम्मेद्वार छैनन् । ती हुन्–नेकपा एमालेका रविन कोइराला । उनले मैदान छाडेपछि एमालेको सम्भावित उम्मेद्वारको रुपमा गोपाल बुढाथोकीको नाम प्रचारमा आउनु स्वाभाविक नै थियो । तर बुढाथोकीले अन्तिममा आएर टिकट पाएनन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा कल्पना समेत नगरिएको बाम गठबन्धन निर्माण भएपछि यस क्षेत्रमा नेकपा माओबादीका बौद्धिक नेता राम कार्की ‘पार्थ’ उम्मेद्वारको रुपमा आएका छन् । कार्कीको आगमनले जबर्जस्त चर्चा पाएको छ ।
बौद्धिक एवम् तार्किक क्षमताका धनी कार्कीको उम्मेद्वारी नेपाली काङ्ग्रेसका विश्वप्रकाश शर्माका लागि ठूलो चुनौति बनेको छ । हुन त काङ्ग्रेस समर्थकहरु कार्की चुनौति होइनन् भनेर देखाउनका लागि ‘अब झन् सजिलो भएको’ प्रचार गरिरहेका छन् ।
काङ्ग्रेस समर्थकहरु बाम गठबन्धनका उम्मेद्वार कार्कीलाई ‘पाहुना’ भएको आरोप लगाइरहेका छन् । कार्कीको उम्मेद्वारीको चर्चा परिचर्चा एमाले र माओबादी वृत्तबाट भन्दा काङ्ग्रेस सर्कलबाटै बढी मात्रामा भइरहेको छ ।
कार्कीलाई ‘पाहुना’को रुपमा चर्चा गर्नुको मुख्य लक्ष्य ‘लोकल’ उम्मेद्वार भनेर विश्वप्रकाशलाई बढी भोट आउन सकोस् भन्ने नै हो । तर काङ्ग्रेस सर्कलबाट आएको आरोपको बाम खेमाबाट जोडदार प्रतिरक्षा भने भइरहेकै छ ।
बाम गठबन्धनका उम्मेद्वार कार्की स्वयम्ले आफ्नो पुख्र्यौली घर शान्तिनगरमा रहेको, आफ्नो जग्गा जमिन पनि यसै क्षेत्रमा भएको र काँकरभिट्टामा भाइभतिजाहरुको बसोबास रहेको बताउँदै आएका छन् ।
‘सामन्त र पूँजीपतिहरुको पो विर्ता हुन्छ, कामत हुन्छ , किलोथलो हुन्छ, सर्वहारा वर्गका मान्छेहरुका लागि सिङ्गो नेपाल नै आफ्नो घर हुन्छ नि’–बाम गठबन्धनका समर्थकहरुले भन्न र लेख्न थालिसकेका छन् । यो भनाई पाहुना र लोकलको रुपमा विभाजन कोर्नेहरुका लागि भएको बुझिन्छ ।
समर्थकहरु अहिले नै यसरी भिड्न थालेका छन् कि झापा क्षेत्र नं. १ को चुनावी भिडन्त आगामी दिनमा अझ रोचक हुँदै जाने निश्चित छ । तर यो प्रचारको प्रारम्भिक लडाइँमा उम्मेद्वार शर्मा र कार्की भने घोचपेचमा उत्रिएका छैनन् ।
स्वतन्त्र विश्लेषकहरु यस क्षेत्रमा बाम गठबन्धन विश्वप्रकाशका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको बताउँछन् । गठबन्धन बनेको थिएन भने यसपाली चुनावमा विश्वप्रकाशको सामना गर्न कुनै पनि दललाई फलामको च्युरा चपाउनु जस्तै थियो । एक्लाएक्लै भिड्ने परिस्थितिमा उनी बलिया थिए ।
तर अङ्कगणितीय राजनीतिले बाम गठबन्धनलाई यस क्षेत्रमा बलियो देखाएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा आएको मतका आधारमा हेर्ने हो भने काङ्ग्रेसको तुलनामा बाम गठबन्धनको मत ९ हजार ज्यादा रहेको छ । काङ्ग्रेसले यो अन्तरलाई छिचोल्नु पर्ने छ ।
नेकपा एमालेको मत ज्यादा भएको यस क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभामा सूर्य चिह्नको उम्मेद्वार नभएको हुँदा एमालेको मत छरपस्ट हुने अपेक्षा काङ्ग्रेसले गरेको छ । यसपालीको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि विश्वप्रकाशले गठबन्धनको भोट व्याङ्कमा रहेको करीव ५ हजार मत तान्नु पर्ने छ । काङ्ग्रेसको चुनावी रणनीति यही आँकडाको आधारमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।